Ny dingana fambolen-kazo dia dingana lehibe amin'ny ezaka fambolena haran-dranomasina, izay entina avy any amin'ny toeram-pambolena zana-kazo ny haran-dranomasina ary miverina any amin'ny toeram-ponenan'ny haran-dranomasina.
Ny fambolen-kazo ihany koa dia mety ho ampahany lafo indrindra sy be asa amin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina noho ny ora maro ary olona maro no ilaina amin'ny fampiasana SCUBA sy sambo. Noho izany, ity dingana ity dia tokony hatao miaraka amin'ny drafitra am-pitandremana mba hampihenana ny fahaverezan'ny haran-dranomasina nokolokoloina. Ny fiheverana manan-danja mba hampitomboana ny fahombiazan'ny fambolena dia ahitana:
Fifidianana toerana fambolena
Ny fisafidianana toerana dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fandaharan'asa fanarenana ny haran-dranomasina.
Ny lafin-javatra tokony hodinihina amin'ny toerana fambolena dia ahitana:
Toetran'ny toerana (ohatra ny kalitaon'ny rano, ny asan'ny olombelona, ​​ny habetsahan'ny biby mpiremby haran-dranomasina, ny haran-dranomasina marary)
Misy karazana haran-dranomasina ambolena any an-toerana
Toetran'ny angovo onja
Ny fidirana amin'ny tranokalan'ny garderie
Mora ny fambolena
Miankina amin'ny toerana misy ny akanin-jaza (ohatra, toeram-pambolena eny an-tanety), ny haran-dranomasina dia mety mila fe-potoana acclimation alohan'ny hambolena any an'ala. Mety ho tafiditra ao anatin'ny haran-dranomasina ny fanitsiana ny jiro, ny mari-pana, na ny fikorontanan'ny toerana fambolena.
Ny fampihenana ny adin-tsaina amin'ny vatohara dia zava-dehibe indrindra rehefa mitondra vatohara avy amin'ny akanin-jaza mankany amin'ny toeram-pambolena. Ny haran-dranomasina dia tokony entina mandritra ny fotoana mangatsiaka sy milamina kokoa amin'ny taona, fa tsy amin'ny fotoan'ny adin'ny hafanana na ny fiakaran'ny tafiotra.
Ny vato harana dia tsy tokony hambolena raha toa ka misy toe-javatra tsy mety toy ny fahaverezan'ny tavy vao haingana, ny fiovan'ny loko, ny fanafoanana na ny katsentsitra. Noho ny vidin'ny fikojakojana ny vato harana ao amin'ny akanin-jaza, dia tsara kokoa ny mamboly vatohara raha vantany vao lehibe izy ireo mba hananana vintana tsara ho velona aorian'ny famindrana.
Ny Corals dia namboarina amin'ny alàlan'ny fiarovana azy ireo amin'ny vatohara amin'ny fampiasana fomba amam-panao samihafa. Ny fomba fitahirizana dia tokony hosedraina ary hofaritana amin'ny ampahany ny karazan-karazan-javamaniry voajanahary, ny karazam-pandrefesana ao amin'ny toeram-pambolena, ary ny toetry ny habaka. Alohan'ny hampiasana fomba fitsaboana rehetra dia tokony hodiovina amin'ny fantsom-panafody ny bakteria sy ny sedim-pandaminana rehetra amin'ny fampiasana borosy madinika sy hidy.
Karazan-javamaniry vao avy namboarin'i Ft. Lauderdale, Florida. Sary © Tim Calver
Fiantohana sy fitetezana
Tsy misy endrika “tsara indrindra” ho an'ny fambolen-kazo satria miovaova amin'ny toerana sy ny karazana karazana vato harana ampiasaina. Zava-dehibe foana ny fampiasana tranokala fanondroana mba hampahafantarana ny famolavolana fambolena. Ny fampandehanana ny hakitroky sy ny elanelana isan-karazany dia hanampy amin'ny fanaparitahana ny risika sy hamaritana ny endrika mety indrindra.
Ny fototarazon'ny haran-dranomasina nambolena dia heverina ho zava-dehibe amin'ny famerenana ny mponina any an-dia satria mampitombo ny mety hisian'ny fampidiran-dra sy ny famoronana olona tsy manam-paharoa amin'ny fototarazo. Noho izany, zava-dehibe ny mamboly fifangaroan'ny genotype raha azo atao.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fambolen-kazo ho amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina, dia jereo ny lesona 2: Fampielezana ny haran-dranomasina sy ny akanin-jaza eny an-tsaha ary ny lesona 3: ny akanin-jaza eny an-tanety.